/ब्लग/ग्यालरी/शरीरको बिरुवा, खुट्टा, र चक्रमा कच्चा प्रायरोन (मेस्ट्रोलोन)
प्रकाशित 01 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
के Is Raw Proviron (Mesterolone)?
कच्चा मेस्ट्रलोन एक क्रिस्टलीय पाउडर हो, सेतो देखि पहेँलो र पानीमा भंग गर्दैन। यो सामान्यतया यसको ब्रान्ड नाम, प्रोयरोनको रुपमा चिनिन्छ। प्रत्येक Proviron ट्याबलेट / गोली नजिकै 25mg हुन्छ कच्चा mesterolone पाउडरअन्य स्टेरियोड्स को विपरीत, कच्चे मेस्ट्रलोन धेरै कमजोर या anabolic गतिविधि शून्य पनि छ। यस कारणको लागि, यो उल्लेख गरिएको छैन anabolic steroid। यो मौखिक तवरमा कुनै mesterolone इंजेक्शन प्रशासित छ।
शेरिंगले 1934 मा मेसेस्टोलोन विकसित गर्यो। यो मेथिलिस्टस्टोस्टेरोन र टेस्टोस्टेरोन प्रोभियन्स को साथ प्रयोग गरिएको सबै भन्दा पुरानो स्टेरियोड्सहरुमा क्रमबद्ध गरिएको छ जुन क्रमशः 1935 र 1937 मा दबाइमा प्रयोग गरियो। टेस्टोस्टेरोन propionate र Methyltestosterone आफ्नो मजबूत एनाबोलिक गतिविधि को कारण अधिक जान्दथे। प्रोयरोनलाई कमजोर स्टेरॉइड मानिन्छ किनभने यसको लोकप्रियता अन्य दुई स्टेरियोड्सहरूको तुलनामा बढ्न सकेन।
जितेर मस्टरोलोन (प्रोयरिरोन) लाई एक पुरानो औषधि मानिन्छ, यसको सकारात्मक विशेषताहरु अझै सम्म नै खडा हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरू र सुरक्षा बीच सहिष्णुताको सन्दर्भमा यो एक धेरै प्रभावकारी औषधि हो। चिकित्सा क्षेत्रमा, मेस्टरोलोन (1424-00-6) उमेर मा कम भइ रहेको उपचार को लागी प्रयोग गरिएको छ जो लिडो रोग, बांझपन र कम एन्ड्रोजन को स्तरहरु लाई पीडित गर्दछ। यो एक राम्रो मौखिक एनाबोलिक स्टेरियोड्स मध्ये एक हो।
औषधिमा, मेस्टरोलोन (प्रोयरेरोन) मुख्य रूपले बेरोजगारी गर्न प्रयोग भएको थियो। जबकि अन्य एन्ड्रोजेनिक या एनाबोलिक स्टेरियोड्स अंतर्निहित गोंडोट्रोपिनन्स अस्थायी बांझपन को कारण दबाएर प्रोरेयरन को उपयोग गर्दछ जब मानक खुराक मा प्रयोग गरिन्छ शरीर मा एलएच को स्तर को प्रभावित गर्दैन। यद्यपि, यो राम्रो छैन कि Proviron ले एलएच स्तरहरु लाई बढावा गर्दैन जस्तै केहि मान्छे विश्वास गर्छन। अनुसन्धानको अनुसार, मेसेस्टलोनले यो प्रक्रियाको लागि आवश्यक एन्ड्रोनिकिक प्रभाव प्रदान गरेर टेस्टेसमा शुक्राणुगृहको उत्पत्ति बढाउँछ।
Proviron स्टेरॉइड यसको बाटोमा अद्वितीय छ तर केहि विशेषताहरु साझा गर्दछ Winstrol, Masteron र Anavar संग। प्रदर्शनकारी, मांसपोलोन मांसपेशिहरु को निर्माण को बढावा गर्न को लागी प्रयोग नहीं गरिन्छ। तथापि, यो चक्र चक्रको समयमा आवश्यक भूमिका निभाउँछ। यसको प्रयोग काटेर चक्रहरूमा थप सान्दर्भिक छ, यद्यपि यो प्रकार्य यस चरणमा पनि अद्वितीय छ।
Schering हाल ब्रान्ड नाम, दुनियाभर मा Proviron, अन्तर्गत Mesterolone निर्माण गर्दछ। यो विभिन्न नामहरू प्रयोग गरी बेचेको छ, उदाहरणका लागि, जर्मनीमा एस्चे र जेनिफर्मले यसलाई क्रमशः Pluriviron र Vistimon को तहत बेचछ। भारतमा ब्राउन र बर्क यसलाई यसलाई पुनर्स्थापनाको नाममा बेचियो। दुःखको कुरा, प्रोरेयरन अमेरिकामा डाक्टरको रूपमा कहिल्यै अनुमोदन गरिएको छैन
कच्चा प्रायरोन (माइस्ट्रोन) रासायनिक विशेषताहरू
Mesterolone एक XhUMrotestosterone डेरिवेटिव भनेको माथाइल समूह, 1-Methyl-dihydrotestosterone को समावेश को माध्यम ले बदलयो, यसको 1 माst कार्बन। यस कारणको लागि, यस औषधीले हिस्पैनिक ब्रेकडाउन गुमाउँदैन त्यसैले यसरी मौखिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। मौखिक एनाबोलिक स्टेरियोड्स को बीच, प्रोयरिरोन C17-अल्फा alkylated को बिना केहि छ, तर एक मेथिल समूह को हेरचाह गर्दछ। मौखिक Primobolan मेथिल समुहको बारेमा प्रोरेयरोनको रूपमा एउटै कोटीमा फसेको छ। C17-aa मौखिक स्टेरियोड्स प्रोयरोन भन्दा उच्च बायोउभेट सुविधा छ। यसले प्रभावकारी वृद्धिको बाधाधारीहरूलाई नकारात्मक रूपमा बीच प्रोयरोनको लोकप्रियतालाई प्रभावित गरेको छ।
टेस्टोस्टेरोनसँग तुलना गर्दै, मेस्टरलोनले क्रमशः 100-150 र 30-40 को anabolic र androgenic मूल्याङ्कन गर्दछ। प्रत्येक श्रेणीमा 100 मा टेस्टोस्टेरोन दरहरू। यहां सम्म कि उच्च एनाबोलिक रेटिंग संग, Mesterolone टेस्टोस्टेरोन भन्दा कम एनाबोलिक गतिविधि प्रदर्शित गर्दछ। यही अवस्थामा होलोटस्टिन जान्छ जुन उच्च एनाबिक मूल्याङ्कनको लागि चिनिन्छ तर कम anabolic गतिविधि। Proviron androgenic मूल्याङ्कन समय र androgenic गतिविधि को स्तर मा कम छ।
माथि उल्लेखित रूपमा, यो दबाइले अन्ड्रेजेनिक स्टेरॉइडको रूपमा उल्लेख गरिएको अतः अनिवार्य एनाबोलिक विशेषताहरू देखाउँछ। जस्तै DHT, यसको अभिभावक यौगिक, प्रोयरोन टूटी हुन्छ र मेटाबोलस्टेड निष्क्रिय चयापचयमा तीव्र तुरुन्तै मांसपेशी ऊतकहरू यसलाई अवशोषित गर्दछ। यो कमजोर एनाबोलिक गतिविधिहरू छन् किन मुख्य कारण हो।
एंजाइम 3-हाइड्रोक्सिस्सोइड डाइडिड्रोजनेज, जो अत्यधिक मांसपेशी ऊतकों मा केंद्रित हुन्छ, dihydrotestosterone को बाँध्छ र यसलाई शून्य एनाबोलिक प्रभाव संग एक मिश्रण मा बदलन गर्दछ। यसकारण प्रायरोन, धेरै कमजोर एनाबिक स्टेरॉयड हुन्छ। बडी बङ्गलादेशहरूमा अफवाहहरू यो हुन् कि प्रोसेरोन मांसपेशियों ऊतक मा पाइन्छ र अरोजन रिसेप्टरहरू बार्सिन्छ जसले गर्दा यसको एनाबिक गतिविधि कमजोर हुन्छ। वैज्ञानिक, यो मामला होइन।
Mesterolone सेक्स हार्मोन बाध्यकारी ग्लोब्लिन (SHBG) को लागि एक शानदार सम्पति को विशेषता हो, एक प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन जस्तै, एक एनालिक स्टेरियोइड्स मा संलग्न गर्दछ। जब Proviron अन्य anabolic स्टेरियोड्स संग एक साथ प्रयोग गरिन्छ, यो यस प्रक्रिया को माध्यम ले anabolic स्टेरियोड्स को प्रभाव र गतिविधि को बढावा दि्छ। अन्तमा, अधिक टेस्टोस्टेरोन शरीरमा यसको प्रकार्य प्रदर्शन गर्न निःशुल्क छ।
Proviron एंजाइम संग अन्तरक्रिया गर्न सक्छ जुन टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन को कनवर्ट गर्दछ, जसलाई aromatase एंजाइम भनिन्छ। यो स्टेरॉयड aromatase गतिविधि को आफु aromatase एंजाइम बाध्यकारी द्वारा रोकछन र यसैले एस्ट्रोजनिक दुष्प्रभाव को रोकथाम। यसको विरोधी-एस्ट्रोजेनिक प्रभावहरु अरोटटेज अवरोधक को रूप मा शक्तिशाली नहीं हुन सक्छ, तर प्रभाव उल्लेखनीय छ। स्तरको चक्रको आधारमा बिजुली बिल्डर निर्माण हुन्छ।
शरीर सौष्ठवमा कच्चा प्रायरन (मेस्टोलोन) फाइदाहरू (Proviron के गर्छ?)
बल्किंग चक्र फाइदाहरू
Proviron मुख्य स्ट्रिइड होइन कि बडी बहादुरीहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ चक्र चक्र। केही चक्र बन्द हुँदा पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। तर, एक स्ट्याकमा प्रोयरिरोन सहित, बल्क चरणको साथ एक बिजुली बिल्डर सफलता एक स्थिर बिन्दुलाई मद्दत गर्दछ। प्रगति को लागी शुरू हुन सक्छ र धेरै चोटि धेरै व्यक्तिहरूको लागि चक्रको समयमा केहि समय रोकियो। यस बिंदुमा प्रोभेरोन धेरै लाभ हुनेछ किनभने यसले अन्य स्टेरियोड्सहरूको स्वतन्त्रतालाई स्ट्याकमा समावेश गर्दछ जसले यसको गतिविधिको स्तर बढाउँछ।
प्रतिस्पर्धात्मक शरीरशैलीहरूले काटेर चक्रको समयमा टेस्टोस्टेरोनको ठूलो खुराक प्रयोग गर्दछ, तर सामान्यतया, खुट्टा यो चरणको अवधिमा बन्द मौसमको तुलनामा कम हुन्छ। तथापि, केही प्रयोगकर्ताहरूले केही व्यक्तिगत कारणहरूको लागि चक्रको मौसममा सीमित मात्रामा टेस्टोस्टेरोन लिन चाहन्छन्। Mesterolone यस्तो मामला मा काम गर्दछ जब देखि यो आवश्यक एन्ड्रोजन को बढावा दि्छ। यो अनावश्यक रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर यो धेरै फायदेमंद छ।
चरण लाभ काट्दै
काटा चक्रको समयमा कच्चा मेस्टरलोन, बाहिरी बहारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस चरणको समयमा, यो मास्टरनका जस्तै समान सुविधाहरू देखाउँदछ। यद्यपि, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाभ स्ट्याकमा समावेश अन्य स्टेरियोड्सको कडा प्रदर्शनको क्षमताको क्षमता हो। प्रोयरोनले शरीरको बोसो छिटो र अधिक कुशलतापूर्वक जलाउन प्रयोगकर्तालाई सक्षम पार्ने एन्ड्रोजन रिसेप्टरलाई दृढ बनाउँछ। Proviron को एस्ट्रोजेनिक प्रभाव को देखते भएका, प्रयोगकर्ताहरु लाई कम से कम पानी को अवधारण मा पीडित हुनेछ, र शायद, स्टैक मा एक पारंपरिक विरोधी एस्ट्रोजन सहित कुनै आवश्यकता नहीं हुनेछ। साथै, प्रोरेरोनले नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोनको संख्या बढाउँछ। यो धेरै मद्दत हो किनभने एनाबिक स्टेरॉइड प्रयोगको अवधिमा टेस्टोस्टेरोन तह सामान्यतया कम हुन्छ। परिणामहरू प्रेरेरोन समावेश गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अधिक हुनेछ जब प्रयोगकर्ताहरू भन्दा कम टेस्टोस्टेरोन खुट्टामा। संक्षेपमा, काटिएको चक्रको समयमा mesterolone को एक महत्वपूर्ण लाभ हो अन्य शरीर को कठोर उद्देश्य संग स्टकमा समावेश अन्य स्टेरियोड्स को एन्ड्रोजनसिटी सुधार गर्न को क्षमता हो। को प्रभाव Proviron खुराक यदि प्रयोगकर्ता दुबई छ भने मात्र ध्यान दिन सकिन्छ।
जस्तो कि पहिले छलफल गरियो, मेस्टरलोन (प्रोयरिरोन) डीटीटीको व्युत्पन्न हो। यसको मतलब यो यसको प्रयोगले कुनै एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्टको बारेमा ल्याउँदैन। अन्य विरोधी एस्ट्रोजेन गोलहरूको तुलनामा, उदाहरणका लागि, नोल्वाडेक्स, प्रोयरेरोन यद्यपि धेरै बलियो छैन, एक अधिक प्रभावकारी एस्ट्रोजेन अवरोधक हो। यो स्पष्ट गर्न, Proviron एस्ट्रोजेन उत्पादन रोक्न जबकि अन्य गोलहरू शरीरमा पहिले नै उत्पादन गरिएको एस्ट्रोजन रोक्न। बाहिरी बनाइएका व्यक्तिहरू जो संवेदनशील एस्ट्रोजन हुन्छ अन्य स्टेरियोड्ससँग प्रोरेनोन प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्य स्टेरियोड्सको कारणले एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट प्रोरेयरोन द्वारा कम हुन्छ जब स्ट्याकमा समावेश गरिन्छ। यसको एस्ट्रोजेन फिचरको कारण, प्रोरेयरन अब चिकित्सा क्षेत्रमा स्तन कैंसर र जुनेकोमास्टियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Proviron स्टेरॉयड, बस जस्तै DHT व्युत्पन्न, शरीर बोसो हानि मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। यसले शरीरमा भण्डार गरिएको चर्को भण्डारणलाई दिनदिनका गतिविधिहरूमा प्रयोग गर्ने ऊर्जालाई बढाउँछ। बदमामा, शरीरमा लिपिड स्तर कम हुन्छ। लिपिड को स्तर मा कमी को प्रोरेयरोन उपयोग को कारण बढयो androgen स्तर को बारे मा ल्याइन्छ। यसैले चिसो काट्ने क्रममा मेस्टरलोन धेरै कुशल हुन्छ।
स्टेरॉइड प्रयोग अत्यन्तै साहसपूर्ण हुन सक्छ जब विशेष रूपमा प्रयोगकर्ताहरूले अरोमेटेशन र पछि लाग्ने प्रभावहरूसँग सम्झौता गर्नु पर्छ। यो एक प्रक्रिया हो जसको शरीर मा टेस्टोस्टेरोन वा स्टेरियोड्स को माध्यम ले प्रशासित गरिन्छ यो एस्ट्रोजन मा परिवर्तित हुन्छ। त्यस पछिको असरले पानीको बिरोध, वजन बढाने, जिनेकोमास्टिया, हर्मोनल प्रवाहिका साथै अन्यहरू पनि समावेश गर्दछ। एस्ट्रोजनले एन्टी-एनाबोलिक तनाव हार्मोनको उत्पादनलाई पनि उत्तेजित गर्दछ जुन कोर्टिसोल भनिन्छ।
सुसमाचार यो प्रोरेयरोन बढेको छैन। यसले यो खतरनाक प्रक्रियालाई आफुलाई बाध्य पार्ने एंजाइमलाई रोक्न को लागी धमनी बढाउँछ। यसैले Proviron एस्ट्रोजेनिक गतिविधि रोक्छ र यसैले यी गतिविधिहरु द्वारा ल्याउन दुष्प्रभाव विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दछ।
अन्य स्टेरियोड्स गतिविधिमा सुधार गर्छ
अधिकतम परिणाम प्राप्त गर्न, बडिबिल्डरहरूले प्रोबेरोन स्टेरॉयडको साथ anabolic र एन्ड्रोजेनिक स्टेरियोडहरू स्ट्याक गर्छन्। पहिलो, पहिले नै उल्लेख गरिएमा, यो एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्टहरू निस्कन्छ। दोस्रो, प्रोरेयरोनले अरू स्टेरियोड्सहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि उत्प्रेरकको भूमिका खेल्छ। यसले यो गर्न सक्छ किनभने यसले आफैं शरीरको तर्फबाट एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरूलाई बाँध्छ। लामो दौडमा, सबै स्टेरियोड्स स्ट्याकमा थपियो अधिक सक्रिय हुन्छ। उदाहरणका लागि जब साथ साथ प्रयोग गर्दछन् Anavar वा Androlic स्टेरॉयड।
सेक्स हार्मोन बाध्यकारी ग्लोबिनन (SHBG) घटाउँछ
सेक्स हार्मोन बाध्यकारी ग्लोबिनले शरीरमा उपलब्ध टेस्टोस्टेरोन बाँच्न नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोनको संख्या घटाउँदछ। Proviron को यस हार्मोन को लागि एक उच्च बाध्यकारी आत्मीयता छ, यसैले यो कम, जिसके परिणामस्वरूप मुक्त टेस्टोस्टेरोन को बढाव संख्या हो। नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोन मा माटोपेशिहरु लाई बढावा दिन को समयमा बढावा दि्छ र चक्र को काट राख्छ। आफ्नो चक्र स्ट्याकमा Proviron समावेश गर्ने व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा निश्चित परिणामहरूको आनन्द उठाउँनेछन्।
पुरुष बेरोजगारीलाई सुधार गर्दछ
Mesterolone 1424-00-6 पुरुष उप-उर्वरता वा बेरोजगारी अवस्थाको लागि एक उचित औषधि हो। अधिकांशतया अवस्थामा, यो समस्या शुक्राणु उत्पादनको कम स्तरको बारेमा ल्याइन्छ। यद्यपि पुरुष बेरोजगारी र प्रजननशीलताको बारेमा विवरण धेरै स्पष्ट छैन, यो मानिन्छ कि शुक्राणु उत्पादन gonadotrophins मा निर्भर गर्दछ र ओरेगेन, उदाहरण को लागि, टेस्टोस्टेरोन। यी हार्मोन यौन अंग उत्तेजित गर्न जिम्मेवार छन्। Proviron, अर्कोतर्फ, उत्तेजित गर्दछ androgens तर यो gonadotrophins लाई असर गर्दैन। यो प्रोइरिन शुक्राणु गिनती प्रजनन बढावा गर्न को लागी अनुवाद गर्दछ।
प्रतियोगिता तयारीको लागि बिल्कुल सही
प्रतियोगिताको लागि तयारी गर्दा प्रोयरोन एक सही साथी हो। यो बलियो बनाए राख्ने, मांसपेशी दृश्यात्मकता सुधार र प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धाको अवधि मा मांसपेशियों को बनाए राखन मा एड्स। अनगिन्ती बडी बहालीहरूले क्यान्सर र कटाईका लागि प्रोयेरोनको प्रयोग गरेका छन् किनभने यो एस्ट्रोजनको स्तर बढ्दै गर्दा एस्ट्रोजन स्तरहरू कम गर्दछ। लामो दौडमा, प्रयोगकर्ताहरूले एस्ट्रोजनिक फाइदाहरू जस्तै अधिकतम शक्ति उत्पादन र मोटो जलविद्युत् प्रभावको रूपमा लिन्छन् जबकि पानी प्रतिधारण कम हुन्छ।
बेपत्ता व्यवहार गर्दछ
जस्तै छलफल गरिसकेपछि प्रायरोनले टेस्टोस्टेरोन बढाउँछ। फिर्तीमा, टेस्टोस्टेरोनले नपुगेको लक्षणहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्दछ, जसले पनि अत्याधुनिक रोग भनिन्छ। यो पनि आश्चर्यजनक रूपमा लिबिया भन्छन्। यो कुनै कारणको लागि पर्याप्त छ बिजुली बिल्डर यसलाई स्ट्याकमा थप्नुहोस्।
कुनै मस्टरलोन इंजेक्शन छैन
छालाको मा सुई प्रयोग गर्ने सोझो शरीर बिरुवाहरू स्टेरॉइड प्रयोग गर्न निरुत्साहित हुन सक्छ। सौभाग्य देखि, Proviron मौखिक रूप ले लिया छ, एक नै तरिका मा तपाईं एक दुखाइ रिलीवर ले सके। यदि तपाइँले सुईलाई घृणा गर्ने प्रकार हो भने, प्रोरेयरोन तपाईको छनौट हुनु हुँदैन जुन अन्य शरीर निर्माणका लागि यो प्रस्ताव गर्न को लागी बिर्सनु हुँदैन।
दुर्व्यवहार को लाभ
मेस्टोलोन मा गरियो मेडिकल टेस्ट को एक संकेत दिए कि यस स्टेरॉयड अवसाद को पीडा केहि प्रयोगकर्ताहरु को मनोवैज्ञानिक राज्य बेहतर हुन सक्छ। यसले यस अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिहरूमा प्रयोगलाई आकर्षित गरेको छ। वैज्ञानिक, परीक्षण नतीजा निर्णायक थिएनन् किनकि त्यस्ता अवलोकन जुन placebo नियन्त्रण समूहमा गरिएको थियो। Proviron उच्च androgenic प्रभाव को विशेषताहरु यसैले हार्मोनल असंतुलन बढाउन सक्छ र पुरुष यौन प्रदर्शन गर्न सक्छ। बारीमा, Proviron भलाई, आत्मविश्वासको भावनामा सुधार र बिजुली बिल्डरमा एक सकारात्मक र राम्रो मन बढावा दिन्छ।
कच्चा प्रायरोन (माइस्ट्रोन) डोजज
Mesterolone, उत्तम मौखिक एनाबोलिक स्टेरॉयड, दुई फरक तरिकामा प्रयोग गरिएको छ; चिकित्सा रोगको लागि केहि बीमारी र शरीर सौष्ठवको लागी। Proviron फायदाहरू धेरै छन् तर सही खुराकहरू व्यवस्थापन हुँदा केवल मजा लिन सकिन्छ। प्रत्येक उद्देश्यका लागि सिफारिस गरिएका कागजातहरू तल छलफल गरिनेछ।
एक 25mg ट्याब्लेट क्षमताको उपचार गर्न र पुरुष यौन सुविधाहरू कम गर्न एक दिनको तेस्रो लागी हुनुपर्छ। कुल खुट्टा 75mg प्रति दिन हुनुपर्छ। यो खुट्टा उपचारको सुरुवात चरणहरूमा प्रशासित हुन्छ। खुराक प्रति दिन एक पटक 25 मिलीग्राम ट्याब्लेटमा घटाउँछ। एक समान Proviron खुट्टा पुरुष बांझपन उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। अन्य ड्रगहरू प्रोयरोनको साथ प्रयोग गरिन्छ उत्तम परिणाम प्राप्त गर्न।
प्रदर्शन वृद्धि शरीरबहिल्डर 50mg को एक 150mg को खुराक को उपयोग गर्दछ। अनुसन्धानको अनुसार, प्रोयरोन आधे-जीवन 12 देखि 13 घन्टा सम्म हुन्छ। यस खुराकको प्राथमिक उद्देश्य पानी को प्रतिधारण को स्तर को कम गर्न को लागि, मुख्य रूप देखि एस्ट्रोजन को कारण हो। साथै, यस खुट्टाले यो सुनिश्चित गर्दछ कि शरीर प्रणाली मा टेस्टोस्टेरोन को स्तर चक्र पछि बांझपन को संभावनाहरु लाई रोक्न आवश्यक छ। धेरै उदाहरणहरूमा, पुरुषहरूले न्यूनतम दिनको रूपमा 100mg प्रति दिन प्रयोग गर्नेछ। तथापि, 150mg र 100mg दैनिक खुराक दुवै बराबर शर्तहरूमा अत्यधिक फायदेमंद हुनेछ। Proviron खुट्टा व्यवस्थापन सामान्यतया आठ देखि बाह्र हप्तासम्म रहन्छ। एक स्टिकिङ बिन्दुलाई पराजित गर्न जुन धेरै चक्रको अन्तिम हप्ताहरूमा हुन्छ, एक छ हप्ता हप्ता Proviron पाठ्यक्रम जादू काम गर्नेछ।
सशस्त्र खेलहरूमा संलग्न महिला प्रयोगकर्ताहरूले Proviron प्रयोग गर्छन्। तथापि, महिलाहरु को यसको अत्यधिक हतोत्साहित द्वारा यसको उपयोग। यदि महिलाले यसलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दछ भने, प्रति दिन 25mg को एक खुराक मांसपेशी दृश्यता बढाउन पर्याप्त हुनुपर्छ। सेन्कले चार देखि पाँच हप्ता भन्दा बढी हुनुपर्दछ अन्यथा प्रयोगकर्ताले भाइरस साइड इफेक्टहरू भोग्नु पर्छ। Proviron र गर्भावस्था असंगत छैन। गर्भवती र नर्सिङ मातृहरूले यो औषधि राख्नु पर्छ।
यदि तपाईं Proviron प्रयोग गरेर योजना, अन्य स्टेरियोड्ससँग स्ट्याक गर्न तपाईंलाई हानि भन्दा बढी राम्रो हुनेछ। माइस्टरोलोनले पनि Winstrol, Androlic, Primobolan, Anavar र Masteron को खोजी गर्दछ जुन चक्र काट्ने क्रममा औषधी संग राम्रो काम गर्दछ। यसले वांछनीय मेहनतको दिन दिनको लागि स्ट्याकमा प्रयोग गरिएको स्टेरियोड्सको एन्ड्रोगेनिकिटी बढाउँछ। केही प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई बल्क चक्रमा समावेश गर्न सक्दछन् भने यसले तिनीहरूको लागि लाभदायक साबित गर्दछ।
कुनै पनि रिपोर्ट अब सम्म प्रतिकूल साइड इफेक्ट्स मा चक्र को समयमा प्रोरेयरोन स्टेरॉयड को तीव्र ओवरडोसाइज को कारण या amesterolone मा पीसीटी। तथापि, एन्ड्रोन्सको असीमित उपयोगले हृदय रोगको प्रभाव पार्छ जस्तै हृदय रोग, भाइरसिस, मनोरोग बिगलन, जिनेकोमास्टिया, लिभर समस्याहरू, ग्लूकोज सहिष्णुता, क्यान्सर क्षति, निकासी सिंड्रोम, हाइपोगोनडेल स्टेटहरू र जस्ट्रोइन्टिनलल रेटिङ। प्रयोगात्मक उपचार प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक नैदानिक ​​मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ। प्रयोगकर्ताहरूसँग पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ जब Proviron लिन्छ र ओभरडोज से बचने को लागि खुराकहरु लाई प्रशासित गर्न को लागी।
कच्चा प्रायरोन (माइस्ट्रोन) चक्र
ध्यान दिनुहोस कि Proviron एक anabolic स्टेरॉयड होइन, वा यसको तुलनामा कमजोर एनाबिक विशेषताहरू छन्, यो मात्र साइकल हुन सक्दैन। यसको सट्टा, यो एक अन्य औषधीय औषधिको रूपमा, अन्य एनाबिक स्टेरियोड्सको साथमा प्रयोग गरिन्छ, शरीरमा एस्ट्रोजेनिक प्रभाव कम गर्न। यसको अतिरिक्त, यसको एस्ट्रोजन प्रभाव र सौंदर्य प्रभाव जो एक कठिन शरीर को बढावा को लागि एक स्ट्याक मा शामिल छ। एक बलियो र्रोनजन हुनुको कारण पनि बडिबिल्डरहरूले यसलाई माया गर्छन्।
पुरुष शरीर निर्माणकर्ता र एथलीटहरू जसले सहायक सहायक भवनको रूपमा प्रोयरोनको प्रयोग गर्दछ भने 50mg को 100mg को सबै चक्रको अवधि दैनिक रूपमा लिन्छन्। यस समयमा, यो समय लिनु पर्ने समयमा कुनै प्रतिबन्ध छैन। Proviron PCT ले केहि निकायका लागि पनि काम गर्न सक्छ। तिनीहरूले यो एस्ट्रोजन स्तर कम गर्न र प्रजनन क्षमता सुधार गर्न गर्छन। यो धेरै खराब निर्णय होइन, धेरै शक्तिशाली प्रभावकारी औषधिहरू छन् जुन पीसीटी जस्तै Nolvadex को प्रयोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि शरीरमा अन्तोजस्तो टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको दमनको खतरा हो भने सबै लागतहरूमा प्रोभेरोनबाट टाढा रहनुपर्छ।
तल चक्रले तपाइँलाई कुन आशाको संकेत दिन्छ।
कच्चा प्रायरोन (माइस्ट्रोन) चक्र 1
हप्ताको Proviron Dianabol
8 50mgper दिन प्रति दिन 40mg
कच्चा प्रायरोन (माइस्ट्रोन) चक्र 2
हप्ताको Proviron Anavar
1 40mg / दिन 40mg / दिन
2 40mg / दिन 60mg / दिन
3 60mg / दिन 80mg / दिन
4 60mg / दिन 80mg / दिन
5 60mg / दिन 80mg / दिन
कच्चा प्रायरोन (माइस्ट्रोन) साइड इफेक्ट्स
अन्य एनाबोलिक र एरेजनिक स्टेरियोड्सको तुलनामा प्रोयरोन सुरक्षित सबै भन्दा स्टेरॉइड हो। शरीरबहिनीहरूले यस स्टेरॉयड प्रयोग गर्न सक्छन् र कुनै पनि अपरिहार्य साइड इफेक्टहरूसँग काम नगरी यसको फाइदा उठाउन सक्छन्। केहि साइड इफेक्ट अनुभव हुन सक्छ, तर सम्भावना कम छ। महिलाहरु को लागि प्रोवायरन सिफारिश छैन किनकी भाइरसेशन को स्तर उपयोग पछि उच्च छ। माइस्टरलोनको सम्भावित साइड इफेक्ट तल छलफल गरिएको छ।
साधारण प्रोभेरोन दुष्प्रभाव समावेश गर्दछ;
स्टन्ट गरिएको वृद्धि
उच्च वा कम ऊर्जा स्तर
त्वरित यौन ड्राइव
स्तनको आकार बढ्यो
उल्टो प्रोवायरोन दुष्प्रभावहरू;
प्रोस्टेट आकार बढ्यो
यदि प्रयोगकर्ताले दूषित mesterolone लिन्छ वा थप खुट्टाहरू व्यवस्थापन गर्दछ भने यी प्रोयरोन साइड इफेक्टहरू अझ पनि खराब हुन सक्छ। यस खतराबाट बच्नको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले प्रोयरोन र सही रकम लिन कहिले थाहा पाउनुपर्छ।
स्टेरियोड्सको सन्दर्भमा नियमहरू, नियमहरू र नियमहरू क्षेत्रहरू र देशहरूका बीच फरक हुन्छन्। मोस्टरलोन (प्रोयरोन) को रूप मा ज्यादा, वैज्ञानिक रूप देखि, यसको न्यूनतम एनाबोलिक प्रभाव को कारण एक anabolic स्टेरॉयड छैन, यो केहि देशों मा एक anabolic स्टेरॉयड को रूप मा मानिन्छ र यसैले दर्ता गरिन्छ वैध। Proviron तीन पश्चिमी देशहरूमा सामान्य छ; संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम र क्यानाडा।
संयुक्त राज्यमा, कच्चा mesterolone नियन्त्रित सब्जन्स अधिनियम अन्तर्गत अनुसूची 111 पदार्थको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ। यस अवस्थामा, यो अधिकारको लागि गैरकानूनी हो वा यस क्षेत्रमा Proviron पनि प्रयोग गर्नुहोस्। आयात, खरिद वा anabolic स्टेरियोडहरूको ट्राफिक, प्रोइरिअन समावेश गरिएको, आपराधिक कार्य मानिन्छ।
यूनाइटेड किंगडम (इङ्गल्याण्ड) मा, प्रोइयरोन अनुसूची IV लागू औषधि मानिन्छ। व्यक्तिगत आवश्यकताहरु को लागि प्रवायरन को उपयोग र उपयोग को यस देश मा कानूनी छ। यस स्ट्रिइडको आयात पनि यूके नागरिकको लागि अपराध होइन।
क्यानाडामा, Proviron भर्खरै यूके जस्तो अनुसूची IV अन्तर्गत दर्ता गरिएको छ। यसको मतलब यो मात्र होइन कि यो यौगिक सम्पत्ति र खरिद कानूनी हो। ट्रफिङ प्रोइरिअन निषेध गरिएको छ र एक असहमति मानिन्छ। ती गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिहरू प्रोरेयरोनले पहिलो अपराधको लागि $ 1000 र / वा छ महिनामा कैद भुक्तान गर्छन्। ती अपराधहरू गर्ने व्यक्तिहरूले $ 2000 ठिक र / वा एक वर्षको कैदमा तिर्नेछन्। यी नियमहरू क्यानेडियन नियन्त्रण ड्रग्स र सबस्टेंस ऐन (CDSA) मा उल्लिखित छन्।
ऑनलाइन बिक्री को लागि Mesterolone
प्रोइरन खरिद गर्नको लागि सबै भन्दा सजिलो र सजिलो तरीका इन्टरनेट मार्फत प्रयोगकर्ताको अनुसार हो। स्थानीय व्यापारीहरूको खरिद तपाईले बढी खर्च गर्नुहुनेछ। धेरै जिम डीलले ड्रग्स नगर्ने वा यसलाई सानो मात्रामा राख्दैनन्। प्रायः अनलाइन सप्लायरहरूसँग Proviron वा ठूलो मात्रामा यसको एउटा फारम छ। नकली अनलाइनमा आउँदै गरेको संभावना विशेष गरी यदि तपाईं सामान्य भूमिगत ब्रान्ड खोज्दै हुनुहुन्छ भने उच्च छन्। तथापि, यदि तपाइँ आफ्नो सप्लायरमा केहि पृष्ठभूमि जाँच गर्नुहुन्छ भने यो स्थिति हुनुपर्दैन। बजारमा ठूलो मात्रामा कानूनी शेरेरेर प्रोयरोनको साथ, जेनेरिक ब्राण्ड खरिद गर्न कुनै पनि कारण हुनेछैन।
क्रिस्टी प्रोभेरोन अनलाइन ड्रग्स प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा आसान तरीका हुन सक्छ, तर जोखिम समावेश छन्। चूंकि Proviron संयुक्त राज्य मा एक अनुसूची III ड्रग हो, यो अनलाइन खरीद तोडने वाला हुनेछ खरीद। यो भारी जरिवाना वा पनि कारावास पछ्याउँछ। प्रयोगकर्ताले यो औषध मात्र खरीद गर्न सक्दछन् भने तिनीहरूसँग एक नुस्खा छ भने। जसमा नुस्खा मेडिकल रूप देखि अनुमोदित हुनु पर्छ, जो सरकार द्वारा उचित र जान्दछ। केही देशहरूसँग समान नियमहरू छन्, यद्यपि अमेरिका कानुनहरूमा अझ कडा कठिन छ। अन्य देशहरु एनालिको स्टेरियोड्स को अनलाइन बिक्री को बिरुद्ध लचीला तर धेरै सख्त हो। तर प्रोरेयरोन सबैभन्दा सुरक्षित एनाबिक स्टेरॉयड हो, एफडीएले संयुक्त राज्यमा यसको प्रयोगलाई वैध बनाएको छैन।
कसरि Proviron किन्न
Proviron अन्य एसिलेशन, एनाबोलिक स्टेरियोड्स वा यौगिकहरूको तुलनामा बजारमा धेरै प्रचलित छैन। यो तथापि एक अनिवार्य यौगिक को रूप मा मानिन्छ जुन बजार मा सजिलै संग उपलब्ध हुनु पर्छ। शेरिंग फार्मास्यूटिकल्स द्वारा कच्ची mesterolone को सबै भन्दा ठूलो मात्रा मा निर्मित गरिन्छ। Proviron को प्रकृति र संरचना को कारण, एक नकली उत्पादन गर्न गाह्रो छ। यो मतलब छैन कि प्रयोगकर्ताहरू सावधान हुनुपर्दछ जब खरिद गर्न। हरेक होइन प्रोभेरोन बिक्रीको लागि विज्ञापन भरोसा भएको छ।
औषधि कम्पनीहरु द्वारा निर्मित उत्पादहरु को अतिरिक्त, वहाँ भूमिगत प्रयोगशाला द्वारा निर्मित निर्मित हो। यी भूमिगत प्रयोगशालाहरू अधिकृत, निरीक्षण गरिएको वा इजाजतपत्र प्राप्त भएन। छोटोमा, तिनीहरू अवैध रूपमा काम गर्छन्। Proviron SARM ठूलो भूमिगत प्रयोगशालाहरू द्वारा निर्मित यौगिकहरु मध्ये एक हो जुन धेरै जनाले चिनिन्छ। सानो भूमिगत प्रयोगशालाहरूले यो यौगिक निर्माण गर्दैन किनभने यो धेरै सामान्य छैन। बरु, तिनीहरू अन्य लोकप्रिय एनाबिक स्टेरियोड र एन्टिलेरीहरू उत्पादन गर्न छनौट गर्छन्।
सामान्यतया, Proviron धेरै महंगा छैन, र केहि हद सम्म, यो सजिलै संग स्थित हुन सक्छ। औषधि कम्पनीहरुबाट खरिद गरी भूमिगत आपूर्तिकर्ताहरूबाट यो खरिद भन्दा बढी महँगी छ। यो तथापि, सबै भूमिगत प्रयोगशाला (यूजीएल) उत्पादनका लागि दबाइ बनाइएको औषधि बनाइएको हो। उदाहरणका लागि, शेरिंगले 25mg प्रोभेरोनलाई $ 0.83 मा बेच्दछ; अन्य दबाइ कम्पनीहरूले यो $ 0.75 मा बेच्न सक्छन्। भूमिगत प्रयोगशाला (UGL); अर्कोतर्फ, 25mg प्रोरिइरन $ 0.50.also को लागि बेचन, भूमिगत प्रयोगशालाले कहिलेकाहीं विभिन्न एकाग्रतामा जस्तै प्रोनोनोन निर्माण गर्दछ जस्तै 100mg, 50mg, 25mg वा यहाँ 20mg। अधिकांश भूमिगत निर्मित वस्तुहरु को गुणवत्ता संदेहास्पद छ त्यसैले यस प्रकार औषधि वस्तुहरु संग मूल्यहरु को तुलना तर्क तर्क छैन।
एक विश्वसनीय भरोसेमंद पत्ता लगाउने कानूनी प्रायरोन बेच्न सक्छ कहिलेकाहीं शायद एक कठिन कार्य हुन सक्छ। प्रोभेरोन बिक्रीको लागि बिक्रेता वा mesterolone को लागि इन्टरनेटमा भर पर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले आपूर्तिकर्ताको पृष्ठभूमि जाँच बिना कुनै पनि उत्पादन खरिद गर्नुपर्दैन। तथापि, तपाइँ सजिलै संग हाम्रो बजार बाट Proviron अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। Steroid.com मा, हामी कानूनी एनालिटिक्स प्रस्ताव गर्दछ जुन कानूनी रूपमा कुनै पनि नुस्खा बिना प्राप्त गरिन्छ। हाम्रो मूल्यहरू सस्ती छन् र हाम्रो उत्पादनको गुणसँग मेल खान्छ। जब हामी एक पारदर्शी र कानुनी व्यवसाय चलाउछौं तब हामी सजिलै महसुस गर्नेछौं। Mesterolone मान्छे पनि अन्य anabolic स्टेरियोड्स को खोज गर्दछ, जुन हामी कानूनी रूप देखि प्रदान गर्दछौं।
Proviron अन्य anabolic स्टेरॉयड को रूप मा शक्तिशाली नहीं हुन सक्छ, तर यसको लाभ चक्र को अन्त मा उल्लेखनीय छ। मैले यसलाई मेरो काटने चक्रमा प्रयोग गरेको छु र प्रतियोगिताको लागि तयारी गर्दा। अहिले सम्म सबै केहि राम्रो भएको छ, कुनै शिकायत छैन। यस स्टेरॉयड पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले मैले मेरो शरीरमा टेस्टोस्टेरोन स्तरको समस्या उठाइदिएँ र अन्त्यजन्य टेस्टोस्टेरोनको ठूलो खुट्टा लिन पनि थियो। अब मैले मेरो स्ट्याकमा प्रोयरेरोन बेयर समावेश गरेको छु, म केवल अन्तोजस्तो टेस्टोस्टेरोनको सानो मात्रा र कहिलेकाहीं कुनै पनि प्रयोग गर्दैनु। म यस तथ्यलाई प्रेम गर्छु कि यस स्टेरॉयडले मलाई मेरो चक्र चक्रहरूमा निर्माण गर्न दुबला मांसपेशिहरु बनाए राख्छ। जसरी धेरै बासिन्दाहरूले यसको प्रभावलाई बेवास्ता गरेन, म यसलाई मेरो स्ट्याकमा थप्न रोक्न सक्दैन। यो स्टेरॉयड मैले अघिल्लो मा प्रयोग गरेको अन्य SARMs भन्दा राम्रो छ। वास्तवमा, म केहि समय मा एकपटक तीव्र सिरदर्दसँग मात्र व्यवहार गर्न चाहन्छु। मेरो मनोदशा र भलाइको भावनामा सुधारिएको छ।
प्रोरेयरन के गर्छ? अधिकतर मान्छेले सोझा कि प्रोइयरोन (1424-00-6) एक कमजोर स्टेरॉइड हो। सम्भवतः किनभने तिनीहरू हार्मोन बुझ्न वा सही तरिकामा प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईले यस स्टेरॉयड चल्ने तुरुन्तै एक जादुई परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्न, तर यसको प्रभाव ढिलो र निश्चित छ; विशेष गरी कहिले चक्र चक्रमा। यो अनूठे र विशेष छ किनकि प्रयोगकर्ताहरूले अन्य एनाबिक स्टेरियोड्स प्रयोग गर्दा प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्दछन्। माईक्रोनोन (प्रायरिरोन) प्राप्त गर्न कानूनी रूपमा बिना पर्चा पनि सम्भव छ। खरिदहरूले यसलाई Steroid.com मा जेब अनुकूल मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्दछ।
1 अल्फा-मिथाइल-17 बीटा-हाइड्रोक्सी-5alpha-androstan-3-one
वैज्ञानिक आणविक सूत्र: C2OH3202
Proviron अणु वजन: 304.4716
औषधि निर्माता: Schering
अणु पिघलने बिन्दु: लागू योग्य छैन
Proviron आधा-जीवन: 12-13 घण्टा
मिति जारी: 1960
सिफारिश गरिएको खुराक: 25mgs देखि 200mgs दैनिक
Androgenic / Anabolic अनुपात: 30-40: 100-150
पत्ता लगाउने समय: पाँच देखि छ हप्ता
Proviron परिणाम चित्रहरू
ए जे, एसएल, र एए, ओए (एक्सएनएमएक्स)। मेस्टरोलोन (प्रोयेरोन) सेक्स हार्मोन प्रोफाइलमा कमीको साथ कम शुक्राणु गुणस्तर बढाउन वयस्क पुरुष स्प्रेग डल्ली चूहों परीक्षणमा। वैज्ञानिक अनुसन्धान र निबन्धहरू, 4(4), 320-327।
स्ट्रीमहरू, एमए, र सामग्री, यू यू मांसपेशी शरीर निर्माण प्रणाली।
Casquero, AC, Berti, JA, Teixeira, LLS, and de Oliveira, HCF (2017)। पुरानो व्यायाम कम सेकेन्ड CETP र Mesterolone उपचार काउन्टक्ट्स प्लाज्मा मा व्यायाम लाभहरू लिपोप्रोटिन प्रोफाइल: ट्राजेजेनिक चूहहरुमा अध्ययन। लिपिड, 52(12), 981-990।
माथि 15 Winstrol फायदा तपाईं Winstrol अनलाइन खरीद गर्नु अघि जान्न आवश्यक छ मुँहासे को लागि कच्चे आइओस्टेटिनिनो (एक्टिटन): Isotretinoin संग मुँहासे उपचार